September 2018 – Page 56
बेरोजगार भत्ता पाउन विधेयक सदनमा माग।
September 1, 2018 Spnews Comments Off on बेरोजगार भत्ता पाउन विधेयक सदनमा माग।
काठमाडौँ :रोजगारीका लागि ४० लाख युवा कतारलगायतका खाडी मुलुकमा कठिन श्रम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने विधेयक सदनमा पेश गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमताअनुसारको रोजगारी छनोट गर्ने […]
‘राष्ट्रिय जनावर गाई हुँदैमा मासु खान नहुने भन्ने के छ ?’- आङकाजी शेर्पा (हेर्नुस भिडियो)
September 1, 2018 Spnews Comments Off on ‘राष्ट्रिय जनावर गाई हुँदैमा मासु खान नहुने भन्ने के छ ?’- आङकाजी शेर्पा (हेर्नुस भिडियो)
काठमाडौँ : पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउदै गर्दा कीर्तिपुरमा राजा पृथ्वीनारायण लाई थुक्ने कार्यक्रम राखेर आलोचित भएका आङकाजी शेर्पाले फेरी राष्ट्रिय जनावर गाई काटेर खान किन नहुने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्राय हिन्दु धर्मावलम्बी तथा क्षेत्री ब्राह्मण […]
September 1, 2018 Spnews Comments Off on सीमा क्षेत्रमा भारतीय सेनाको यस्तो दादागिरी, चलाए गाेली
बर्दिया। सीमावर्ती गाउँमा बस्ने राजापुर–६ का गोपाल चन्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट आइतबार घाइते भए । नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा उपचारपछि चन्दको अवस्था सामान्य भए पनि उनको परिवार अझै त्रसित छ । सीमा नजिक बसोबास भएकाले भारतीय […]
उपत्यकाका ४२ स्थानमा फ्रि-वाइफाई चलाउन सकिने, कुन कुन स्थानमा छ ? हेर्नुस पुरा विवरण
September 1, 2018 Spnews Comments Off on उपत्यकाका ४२ स्थानमा फ्रि-वाइफाई चलाउन सकिने, कुन कुन स्थानमा छ ? हेर्नुस पुरा विवरण
काठमाडौं । स्वदेशी र बिदेशी पर्यटकलार्इृ लक्षित गरेर काठमाडौं माहानगरपालिकाले राजधानीका ४२ स्थानमा फ्रि वाइफाई जडान गरेको छ । उपत्यकामा चार पर्यटकिय र चार पार्क गरी ४२ स्थनामा वाईफाई जडान गरिएको महानगरपालिकाका निजी साझेदार कार्यक्रमका […]
नयाँ बानेश्वरमा भेटिए खतरा गायक: पढाई खर्च जुटाउँन बाटो – बाटोमा गाउँदै (भिडियो सहित)
September 1, 2018 Spnews Comments Off on नयाँ बानेश्वरमा भेटिए खतरा गायक: पढाई खर्च जुटाउँन बाटो – बाटोमा गाउँदै (भिडियो सहित)
काठमाडौँ : मान्छेको सपना हजारौ हुन्छ, ति हजारौ सपना भित्र एउटा त्यस्तो सपना लुकेको हुन्छ, जुन सपना जिन्दगीभर साथैमा होस् अर्थात त्यहि सपनाको केन्द्रबिन्दुमा पुग्न खोज्दा खोज्दै जिन्दगीको अन्त्य होस् । यस्तै सपना बोकेका सुलब बिष्ट […]
पाहुना राष्ट्रपतिले आफै छाता ओड्ने हाम्रा उपप्रधानमन्त्रीलाई अरुले ओढाउनु पर्ने ?
September 1, 2018 Spnews Comments Off on पाहुना राष्ट्रपतिले आफै छाता ओड्ने हाम्रा उपप्रधानमन्त्रीलाई अरुले ओढाउनु पर्ने ?
काठमाडौँ : बंगालको खाडीको प्रयास (विमस्टेक)मा सहभागी हुन काठमाडौँ आएका म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्टसंग संगै भएको नेपालका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको एउटा फोटो यतिबेला सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । पानी परीरहेको बेला राष्ट्रपति विन मिन्टसंगै हिडिरहेका […]
काठमाडौंमा जमिन फाट्यो, भत्किए ४ घर ! १४ घरसमेत धरापमा
September 1, 2018 Spnews Comments Off on काठमाडौंमा जमिन फाट्यो, भत्किए ४ घर ! १४ घरसमेत धरापमा
काठमाडौं – बूढानिलकण्ठ नगरपालिका बिष्णुमती टुसालमा शुक्रबार जमिन फाटेपछि चार घर भत्किएका छन् । आजको कान्तिपुरको पृष्ठ ५ मा छापिएको समाचार अनुसार, थप १४ घरसमेत धरापमा परेका छन् । १४ परिवार विस्थापित भएको प्रहरीले जनाएको छ […]